Sarasota, FL • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Aza mankaleo ao Sarasota, FL. Fandriho ny otra ara-nofo nataonao.
Sarasota dia tanàna iray ao amin'ny faritr'i Sarasota, ao amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny fanjakana Florida. Ny faritra dia malaza amin'ny fananana ara-kolontsaina sy ara-tontolo iainana, morontsiraka, trano fisakafoanana ary ny Sarasota School of Architecture. Aza mankaleo ao Sarasota, FL. Mamandrika ny fanorana ara-nofo.